Miyiga dhaqankiisa – dhugasho
maxamedsheekafguun Diseembar 5, 2019 waxbarasho
Dadka reer guuraagu waa dad duruuftu wax badan bartay waxay inta badan istcmalaan oo marka la guurayo lagu guraa Awrta & Dameeraha Awrta waxaa la saraa dhamaan Aqalka sida Hararka, Kabadda, Dhigaha, Tiirarka & dhamaan wixii culus sida haamaha & gurgurka uu ratigu qaado.
Waxaa jira dad aan haysanin gaadiidkaas ama rati ay ku guraan reerkuna hayaan dheer ayuu galayaa maalin ka hor reerka Aqalka oo sidisii ah ayaa geed lagu raari waxaana loo xidhaa si cajiib ah oo roobkasta hadii uu ku da’o uusan waxba yeelaynin.
Waxaa kale oo cajiib ah majiro cid looga cabsanayo in ay aqalkaas raaran qataan ama ay xadaan waxaa laga yabaa 3 sano ama 4 sano in uu aqalkaas raaraado markii loo baahdo ayaa loo tagi oo la soo rari waxaad halkaas ka garan dhaqanku siduu u wanaagsanaa ama dadka aamin u ahayeen.
Aqalka waxaan ka soo sawiray duleedka Tuuladda Sardaale oo aan shalay booqday aad ayaan u jeclahay dhaqanka umadeena.
Xigasho/Qorahey Web TV.
Q-9aad sheekadii Godob-jacayl
Q-10aad sheekadii Godob-jacayl